အကောင်းဆုံးခြေနင်းထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Gimarpol
1. ဘောင်ဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရပ်တည်နိုင်သော တည်နေရာ gasket ပါသော စတီးဝိုင်းပြားခေါင်း။ဇင့်ချထားသည့် စတီးတုံးနှင့် တုန်ခါမှုဆန့်ကျင်သော nut တို့ကို တပ်ဆင်ထားပြီး အံဝင်ခွင်ကျအင်္ဂါရပ်။ရှိပြီးသား ခြေခံခုံကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် စတီးတုံးကို အရွယ်အစား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
2. Flat steel pedestal head သည် လေးသိန်းခွဲ ထားရှိပါမည်။ဇင့်ချထားသည့် စတီးတုံးနှင့် တုန်ခါမှုဆန့်ကျင်သော nut တို့ကို တပ်ဆင်ထားပြီး အံဝင်ခွင်ကျအင်္ဂါရပ်။ရှိပြီးသား ခြေခံခုံကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် စတီးတုံးကို အရွယ်အစား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
အောက်ခံခြေခံသည် အထက်ဖော်ပြပါ ခြေနင်းအခြေခံစတီးလ်စတိုးဖြင့် ထားရှိရပါမည်။FFH = 50mm မှ 2,500mm
Cornerlock အောက်ခံခုံခေါင်းတွင် အမြဲတမ်း ပူးတွဲပါရှိသော သင့်လျော်သော ရော်ဘာတည်ဆောက်မှုရှိသော Freelay Pedestal Head Gasket လိုအပ်ပါသည်။၎င်းသည် panel နှင့် pedestal head အကြား သီးခြားအတားအဆီးတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။gasket ပစ္စည်းများသည် လျှပ်စစ်ခုခံမှု <104 Ω ရှိပါမည်။
ဖော်ပြချက် အောက်ခံခုံအား အအေးခံစတီးပြားခေါင်းအသားလွှာဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး စတိုးနှင့် အောက်ခံပြားလွှာကို ပိုက်ဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။
ဦးခေါင်း ခေါင်းပြား 76mmx76mmx3mm၊ အေးသောစတီးလ်အမျိုးအစား၊ 6mm dia ကိုလက်ခံနိုင်သော ထောင့်အပေါက်4ခုပါရှိသည်။ထောင့်သော့ခတ်ထားသော သံမဏိဝက်အူများ၊4အစွန်းအလယ်ဗဟိုအပေါက်များ နှင့် 6mm dia ကိုလက်ခံသော box stringers များ။ဝက်အူများ။အမြင့်ကိုသော့ခတ်ရန် ခေါင်းပြားကို အခေါင်းပေါက်/အစိုင်အခဲစတိုးဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။
ခေါင်းစွပ်/ပြွန် 19.5mm dia.x90mmL စတီးအခွံမာသီးများဖြင့် ချည်ထားသော အစိုင်အခဲစတီးတုံး
အခြေခံပြွန်/စတိုး 22mm ODဦးခေါင်းစတိုးလက်ခံရန် 1.2 မီလီမီတာ နံရံအထူ သံမဏိပြွန်
အခြေခံပန်းကန် 100mmx100mmx2.2mm အအေးခံစတီးလ်အခြေခံပန်းကန်ပြားလွှာကို အခြေခံစတိုး/ပြွန်ဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။
အပေါ်ယံပိုင်း ဦးခေါင်းနှင့် အခြေခံ လျှပ်စစ်သွပ်အဝါ သို့မဟုတ် ငွေ
Axial Load CISCA 22.5kn မိနစ်